"လယ်ယာမြေ"ကို ရဲရဲသာဝယ်ပါ.. - Barnyar Barnyar
May 27, 2022 thanzin laypyay KNOWLEDGE 0
လယ်ယာမြေကို ၀ယ်ယူတော့မည်ဆိုလျှင် သိထားသင့်သော အချက်များ
လယ်မြေ/ လယ်ယာမြေတို့ကို ဝယ်လိုလျှင် ရဲရဲသာ ဝယ်ပါ။ ဝယ်ပိုင်ခွင့် ရှိနေပါပြီ။ စည်းကမ်း အရတော့ “လယ်မြေ” ဝယ်ရင် လယ်စိုက်ရပါ့မယ်။ ယာမြေ ဝယ်ရင် “ယာ”စိုက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အဲဒီလို မစိုက်ချင်ရင်၊ မြေအမျိုးစား ပြောင်းခွင့် တင်လို့ ရပါတယ်။ လယ်ယာမြေ ဥပဒေ သစ် ရဲ့ အပိုဒ် (၃၀) အရပေါ့ … (အဟောင်း လ/ န ၃၉ လိုပါပဲ) လ/ န ၃၉ ဆိုသည်မှာ လယ်ယာမြေကို မြို့မြေ (သို့) လူနေမြေ အဖြစ်သို့ မြေအမျိုးစား ပြောင်းလဲသတ်မှတ်နိုင်သည့် ပုဒ်မပါ။
ပုဒ်မ -၃၈ နှင့် ၃၉ တို့အရ မည်သည့် “လယ်ယာမြေ”ကိုမဆို သင့်တော်သောနည်းလမ်း၏အတိုင်း မြေအမျိုးစား ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ယခုချိန်မှာ လယ်ယာမြေ ဥပဒေသစ် (၂၀၁၂)မှာက လ/ န ဥပဒေ ထက်တော့ ပိုပြီး ပြည်စုံပါသည်။
“အခြားနည်းအသုံးပြု’ လို့ ခေါ်ဝေါ်တဲ့ (ပုဒ်မ-၃၀ (က) (ခ)) ကိုပြောင်းလဲသတ်မှတ်အပြီး “လယ်မြေ’ တွေကို (လူနေမြေ) အဖြစ် ပြောင်းလဲ လျှောက်ထားပိုင်ခွင့်၊ ရောင်း၊ ပေါင်၊ ငှား၊ လဲ ခွင့်နှင့် ဂရံ မြေအထိ အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲ လျှောက်နိုင်ခွင့် ရမည်ဖြစ်သည်။ ယခုလို လျှောက်ထားနိုင်ရန်အတွက် နည်းဥပဒေ ရဲ့ “ပုံစံ- ၁၄’ ကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် မြေစာရင်းရုံးတွေမှာ ဝယ်လို့ရပါသည်။
ပထမဦးဆုံး အနေနဲ့ ကိုယ်ဝယ်ယူမယ့် “လယ်မြေ’ ရဲ့ ပုံစံ (၇)ကို မြေစာရင်းဦးစီးဌာနမှာ မှန်/ မမှန် အရင်စစ်ဆေးဖို့ လိုပါသည်။ မူရင်း ပုံစံ (၇) ကိုမြင်တွေ့ပြီး စရံငွေပေးပြီး ရပ်ကျေး ဥဏ္ဍဌ နှင့်ညှိနှိုင်းပါ။
▪လယ်မြေ အား ငွေအပြေ ပေးချေတော့မည် ဆိုလျှင်-
၁။ အရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ရန် အတွက် ထုတ်ယူထားသော ပုံစံ- ၁၀၅ တောင်းပါ။
၂။ ပုံစံ- ၁၀၅ မှ ပိုင်ရှင်က ဝယ်ယူသူသို့ လွှဲပေးသော SP လည်း ရရှိပါစေ။
၃။ ထို့အပြင် ပုံစံ (၇)မူရင်းလည်း ယူရပါမည်။
၄။ အထက်ပါအကြောင်းရာများအား စီစစ်ဝယ်ယူပြီးလျှင် “တံဆိပ်ခေါင်းခွန်’ နှင့် “မှတ်ပုံတင်ကြေး’ တို့ ပေးဆောင်၍ မြို့နယ်မြေစာရင်းမှာ မှတ်ပုံတင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုပါ။ ၎င်းစာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီးပါက မိမိဝယ်ယူထားသော “လယ်မြေ’ ကွက်ကို ကိုယ့်အမည် (ဝယ်ယူသူအမည်) ပြောင်း၍ ရပါပြီ။
ထိုနည်းတူ “လယ်ယာမြေ’မှ လူနေမြေ သို့ လျှောက်မည်ဆိုပါက ပုံစံ- ၁၄. ဝယ်ယူအပြီး မြို့နယ် မြေစာရင်းသို့ ပုံစံ- ၁၀၆ အား လိုအပ်ပါက လျှောက်ထားရမည်။ အဆင့်မများပါ။ လွယ်ကူ ရိုးရှင်းပါသည်။
ယခုချိန် မြေကွက်အား ရေရှည်စီမံကိန်းဖြင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံရန် အစီစဉ်ရှိသော မည်သူမဆို ငွေနည်းနည်းပေးပြီး မိမိပြန်ရောင်းထုတ်ချိန် ဈေးကောင်းကောင်း ပြန်ဖို့ရန်အတွက် လယ်မြေများသည် အထူးစဉ်းစားရမည့် အချက်များထဲ ပါဝင်နေပါသည်။
အချက်ချာကျ ပြီး အရပ်လေးမျက်နှာ၌ စီမံကိန်းများ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တိုးတက်လာ၍ အစိုးရ ရာပြည့် Plan များ အရှိန်တင်နေသော နေရာ အနီးနား
လယ်မြေ များသည် နောင်တစ်ချိန်မှာ “ရွှေ’ ဖြစ်လာမည်ဟု အကြံပြုရင်း။
လေးစားစွာဖြင့် အိမ်ခြံမြေ အဝယ်ဖြစ်ဖြစ်၊ အရောင်းဖြစ်ဖြစ် သိလိုသမျှ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ☎09-457422065, ☎09-956708910
#Credit, #Glory_Estate_Enterprise, #RealEstate_Service, #အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း,
လယျယာမွကေို ဝယျယူတော့မညျဆိုလြှငျ သိထားသငျ့သော အခကျြမြား
လယျမွေ/ လယျယာမွတေို့ကို ဝယျလိုလြှငျ ရဲရဲသာ ဝယျပါ။ ဝယျပိုငျခှငျ့ ရှိနပေါပွီ။ စညျးကမျး အရတော့ “လယျမွေ” ဝယျရငျ လယျစိုကျရပါ့မယျ။ ယာမွေ ဝယျရငျ “ယာ”စိုကျရမညျ ဖွဈပါသညျ။
အဲဒီလို မစိုကျခငျြရငျ၊ မွအေမြိုးစား ပွောငျးခှငျ့ တငျလို့ ရပါတယျ။ လယျယာမွေ ဥပဒေ သဈ ရဲ့ အပိုဒျ (၃၀) အရပေါ့ … (အဟောငျး လ/ န ၃၉ လိုပါပဲ) လ/ န ၃၉ ဆိုသညျမှာ လယျယာမွကေို မွို့မွေ (သို့) လူနမွေေ အဖွဈသို့ မွအေမြိုးစား ပွောငျးလဲသတျမှတျနိုငျသညျ့ ပုဒျမပါ။
ပုဒျမ -၃၈ နှငျ့ ၃၉ တို့အရ မညျသညျ့ “လယျယာမွေ”ကိုမဆို သငျ့တျောသောနညျးလမျး၏အတိုငျး မွအေမြိုးစား ပွောငျးလဲ သတျမှတျနိုငျပါသညျ။ ယခုခြိနျမှာ လယျယာမွေ ဥပဒသေဈ (၂၀၁၂)မှာက လ/ န ဥပဒေ ထကျတော့ ပိုပွီး ပွညျစုံပါသညျ။
“အခွားနညျးအသုံးပွု’ လို့ ချေါဝျေါတဲ့ (ပုဒျမ-၃၀ (က) (ခ)) ကိုပွောငျးလဲသတျမှတျအပွီး “လယျမွေ’ တှကေို (လူနမွေေ) အဖွဈ ပွောငျးလဲ လြှောကျထားပိုငျခှငျ့၊ ရောငျး၊ ပေါငျ၊ ငှား၊ လဲ ခှငျ့နှငျ့ ဂရံ မွအေထိ အဆငျ့ဆငျ့ပွောငျးလဲ လြှောကျနိုငျခှငျ့ ရမညျဖွဈသညျ။ ယခုလို လြှောကျထားနိုငျရနျအတှကျ နညျးဥပဒေ ရဲ့ “ပုံစံ- ၁၄’ ကို သကျဆိုငျရာမွို့နယျ မွစောရငျးရုံးတှမှော ဝယျလို့ရပါသညျ။
ပထမဦးဆုံး အနနေဲ့ ကိုယျဝယျယူမယျ့ “လယျမွေ’ ရဲ့ ပုံစံ (၇)ကို မွစောရငျးဦးစီးဌာနမှာ မှနျ/ မမှနျ အရငျစဈဆေးဖို့ လိုပါသညျ။ မူရငျး ပုံစံ (၇) ကိုမွငျတှပွေီ့း စရံငှပေေးပွီး ရပျကြေး ဥဏ်ဍဌ နှငျ့ညှိနှိုငျးပါ။
▪လယျမွေ အား ငှအေပွေ ပေးခတြေော့မညျ ဆိုလြှငျ-
၁။ အရောငျးဝယျပွုလုပျရနျ အတှကျ ထုတျယူထားသော ပုံစံ- ၁၀၅ တောငျးပါ။
၂။ ပုံစံ- ၁၀၅ မှ ပိုငျရှငျက ဝယျယူသူသို့ လှဲပေးသော SP လညျး ရရှိပါစေ။
၃။ ထို့အပွငျ ပုံစံ (၇)မူရငျးလညျး ယူရပါမညျ။
၄။ အထကျပါအကွောငျးရာမြားအား စီစဈဝယျယူပွီးလြှငျ “တံဆိပျခေါငျးခှနျ’ နှငျ့ “မှတျပုံတငျကွေး’ တို့ ပေးဆောငျ၍ မွို့နယျမွစောရငျးမှာ မှတျပုံတငျစာခြုပျ ခြုပျဆိုပါ။ ၎င်းငျးစာခြုပျ ခြုပျဆိုပွီးပါက မိမိဝယျယူထားသော “လယျမွေ’ ကှကျကို ကိုယျ့အမညျ (ဝယျယူသူအမညျ) ပွောငျး၍ ရပါပွီ။
ထိုနညျးတူ “လယျယာမွေ’မှ လူနမွေေ သို့ လြှောကျမညျဆိုပါက ပုံစံ- ၁၄. ဝယျယူအပွီး မွို့နယျ မွစောရငျးသို့ ပုံစံ- ၁၀၆ အား လိုအပျပါက လြှောကျထားရမညျ။ အဆငျ့မမြားပါ။ လှယျကူ ရိုးရှငျးပါသညျ။
ယခုခြိနျ မွကှေကျအား ရရှေညျစီမံကိနျးဖွငျ့ ရငျးနှီးမွုပျနှံရနျ အစီစဉျရှိသော မညျသူမဆို ငှနေညျးနညျးပေးပွီး မိမိပွနျရောငျးထုတျခြိနျ ဈေးကောငျးကောငျး ပွနျဖို့ရနျအတှကျ လယျမွမြေားသညျ အထူးစဉျးစားရမညျ့ အခကျြမြားထဲ ပါဝငျနပေါသညျ။
အခကျြခြာကြ ပွီး အရပျလေးမကျြနှာ၌ စီမံကိနျးမြား တဖွညျးဖွညျးနဲ့ တိုးတကျလာ၍ အစိုးရ ရာပွညျ့ Plan မြား အရှိနျတငျနသေော နရော အနီးနား
လယျမွေ မြားသညျ နောငျတဈခြိနျမှာ “ရှေ’ ဖွဈလာမညျဟု အကွံပွုရငျး။
လေးစားစှာဖွငျ့ အိမျခွံမွေ အဝယျဖွဈဖွဈ၊ အရောငျးဖွဈဖွဈ သိလိုသမြှ ဆကျသှယျမေးမွနျးနိုငျပါသညျ။ ☎09-457422065, ☎09-956708910
#Credit, #Glory_Estate_Enterprise, #RealEstate_Service, #အိမျခွံမွအေကြိုးဆောငျလုပျငနျး,
“ တခါတရံ ရရှိလိုက်တဲ့ ဒဏ်ရာတွေဟာ ဘ၀မှာ ခွန်အားတွေဖြစ်လာတတ်တယ်”
အိမ်ထောင်ဘက်အဖြစ် အရက်သမားအား ရွေးချယ်သင့်သည့် အမျိုးသမီးများ ဒီကောင်းကျိုးများရနိုင်၏…
Total Hits : 333316